Arsenal oo dooneysa inay soo qaadato Xiddiga Inter ee Ivan Perisic….(Haddaba EEG sida ay u muuqan doonto SHAXDA Gunners) – Gool FM
Arsenal oo dooneysa inay soo qaadato Xiddiga Inter ee Ivan Perisic….(Haddaba EEG sida ay u muuqan doonto SHAXDA Gunners)
Byare January 26, 2019
MILAN, ITALY - DECEMBER 11: Ivan Perisic of FC Internazionale looks the ball during the UEFA Champions League Group B match between FC Internazionale and PSV at San Siro Stadium on December 11, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
(Europe) 26 Jan 2019. Arsenal ayaa dooneysa inay Bishan Janaayo soo qaadato xiddiga reer Croatia ee qadka dhexe weerarka kaga ciyaara naadiga Inter Milan ee Ivan Perisic.
BBC Sport ayaa fahansan in Gunners ay kooxda reer Talyaani u gudbisay dalab Amaah ah inta ka harsan kal ciyaareedka ay kaga soo qaadaneyso laacibkooda Persic taa oo leh aragtida inay 35-milyan si joogta ah kula saxiixanayaan marka uu dhammaado kal ciyaareedka.
29-jirka ayaa xulkiisa Croatia ka caawiyay inay markii ugu horreysay taariikhda soo gaaraan Final ka Koobka adduunka iyagoona guul darro 4-2 kala kulmay Faransiiska oo koobka qaaday.
Haddaba The Sun ayaa durba soo jeedisay sida ay u muuqan karto SHAXDA Arsenal haddii ay la soo saxiixdaan Ivan Perisic
Manchester City oo Miirka ka Ceshatay Burnley...+SAWIRRO
Messi iyo Ciyaartooy kale oo waa Wayn oo Qaaday TALAABO CAJIIB AH si NOLOL ama GEERI loogu helo Laacibka la la'yahay